ယာဉ်အဆိုတော်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှုနမူနာပြီးတော့ Functions များ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ယာဉ်အဆိုတော်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှုနမူနာပြီးတော့ Functions များ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 565 views
လက်ဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်ပွားနည်းပရိယာယ်တစ်ခုရွေးချယ်ရေးသုံးပြီးစျေးကွက်နှင့်ခင်းကျင်းပြသပစ္စည်းများလုပ်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်ယက်လုပ်ခြင်းများအတွက်အဖြစ်, ဂဟေ, အိုးလုပ်ငန်းနျင့်ဆိုင်သော, နှင့် needlecraft.
ဖြတ်, ပုံသဏ္ဌာန်, တော်အောင်ပြုပြင်, ပူးပေါင်း, အနာ, သို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်နည်းလမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, ပါဝါ tools တွေကိုစွန်ပလွံ tools တွေကိုအလုပ်သမား, သို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ.
ခွန်အား, အရောင်, ဖွဲ့စည်းပုံ, equilibrium, အလေးချိန်, အရွယ်, ပျော့နှင့်အခြား features တွေကိုအသုံးပြုခံရဖို့ရွေးအရင်းအမြစ်များကိုအားဖြင့်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်.
အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ set လိုအပ်ချက်များကို, အရွယ်, နှင့်ကုတ်အင်္ကျီ.
Perform နှင့်စျေးကွက်ထုတ်ကုန်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအင်တာနက်မြှင့်တင်ရန်နှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များကဲ့သို့စာနယ်ဇင်းသုံးပြီး.
build ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုး, ပြသ, နှင့်စျေးနှုန်းနည်းဗျူဟာ.
လေ့လာမှုတည်ဆောက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, setting များကို, နှင့်စားသုံးသူစတိုင်များအားပေးဖို့အပြုအမူရယူနှင့်နည်းဗျူဟာမြှင့်တင်.
အထူးပြု PC ကို software ကိုသုံးပြီးအသီးအနှံအမျိုးအစားများ.
related ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်စာရွက်စာတမ်းအတွက် Reading အသိပညာ-အသိပညာစာကြောင်းများနှင့်စာဖြင့်ရေးသားအပိုဒ်.
အခြားအ-ကလူစုစုပေါင်းအာရုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အခိုင်အမာအဘယ်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်,, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိအသေးစိတ်နားမလည်ဖို့အချိန်ရတဲ့, စံပြအဖြစ်မေးခွန်းများကိုတောင်းဆို, မှားဖြစ်ကြောင်းသာဓကမှာ mesmerizing မဟုတ်.
သင်ယူမဟာဗျူဟာ-အသုံးချပြီးနှင့်လတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ကျွမ်းကျင်သို့မဟုတ်နည်းပြအလုပ်ကိုအခါအခွအေနေတငျပွ coachingANDeducational နည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်များကိုရှေးခယျြ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ခြေရာကောက်-TrackingORDetermining လုပ်ဆောင်ချက်ကို, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှန်ကန်သောခြေလှမ်းများကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးရန်.
လူမှုရေးအမြင်-သိမှတ်ကြလော့အခြားသူတွေ’ သူတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးအဖြစ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် comprehension.
အခြားသူများစပ်လျဉ်း Dexter-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ’ အပြုအမူ.
သူတို့ရဲ့ဉာဏ်သို့မဟုတ်အကငျြ့ပြောင်းလဲပစ်ရန် Marketing ကို-ဆွဲဆောင်အခြားသူတွေ.
တစ်ဦးချင်းစီကို enable နည်းလမ်းများရှာဖွေနေ Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-ကွိုးစား.
စစ်ဆင်ရေးတခု layout ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကုန်သွယ်တောင်းဆိုချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒများအားသုံးသပ်ခြင်း-စစ်ဆေး.
ဂီယာ tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ကြင်နာတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခဲ့ရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်း.
တပ်ဆင်နေ-Installing ဂီယာ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုး, features တွေတက်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ.
မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်း application များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး-Creating ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်ကြည့်နိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်း, နာရီမျက်နှာပြင်, သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ကိရိယာမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နေသည်သေချာစေရန်.
functioning နဲ့ devices များသို့မဟုတ်နည်းစနစ်များစီမံခန့်ခွဲရန်-ကိုင်တွယ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ.
ကြောင်းဂီယာအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ် servicing အခါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မျိုး servicing ၏လိုအပ်သောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို Maintenance-ဖျော်ဖြေ.
မရှိမဖြစ်သောတူရိယာကို အသုံးပြု. Mende-Restoring မော်ဒယ်များသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးထုတ်ကုန်များ၏စာမေးပွဲများနှင့်အကဲဖြတ်စာမေးပွဲ-ဆောင်ရွက်ခြင်း, န်ဆောင်မှုများ, အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုဆိုင်သောနေရာများတွင်သို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
systems ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လမ်းပြုပြင်မွမ်းမံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-ကိုစူးစမ်း, စစ်ဆင်ရေး, လည်းအခြေအနေများရလဒ်များထိခိုက်စေနိုင်ပြီးတစ်ဦး method ကိုလည်ပတ်ရမယ်ဘယ်လို.
ကုန်ပစ္စည်းသတင်းရင်းမြစ်-မြင်လျှင်နှင့်ထုတ်ကုန်များလျော်သောအသုံးပြုမှုများအတွက်ရှာဖွေတာ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, အဆောက်အ, နှင့်ဂီယာတိကျတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-စီးလူများကြီးကြပ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, အဆောက်အဦး, နှင့် function ကိုအားပေးအားမြှောက်, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အများအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးရှေးရှေးအဆုံးအဖြတ်.
high-ကျောင်းဘွဲ့ (သို့မဟုတ် GED သို့မဟုတ်မြင့်မားသော-ကျောင်းနှင့်ညီမျှစာရွက်စာတမ်း)
AchievementsORWork – %
Pingback:6တစ်ဦးကအောင်မြင်သောတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးသည်စိတ်ကူးများ| | မွေပွငျအောကျလမျး